Ny Semalt Islamabad Expert dia manoratra ny Top 10 Bots Tokony ho Fantatrao
Botnets sy bots dia mifandray amin'ny hackers sy cybercriminals izay mangalatra ny angona, ny karatra nomerao ary ny maha-izy azy ny mpisera anaty aterineto. Ny bots ampiasaina matetika dia manatanteraka tanjona tsara, ary ny fisintahana botsotra amin'ny botsiho tsara dia afaka mampiavaka ny fomba hiarovanao ny tranokalanao ary ahazoana antoka fa mahazo fahazoan-dalana mendrika avy amin'ny motera . Ny ankamaroan'ireo bota tsara rehetra dia mpitsikilo nalefan'i Google, Bing, ary Yahoo mba hamantarany ny votoatin'ny sehatra media sosialy sy ny valin'ny fikarohana. Raha tianareo ny botsiho hitsidika ny tranokalanao dia tokony ho fantatrao ny momba azy ireo. Hahazo tombony sy fahombiazana bebe kokoa ry zareo, ary ny fanakatonana azy ireo dia afaka mamotika ny laharan'ny tranonkalanao amin'ny aterineto. Amin'izany fotoana izany, tokony handinika tsara ny fanakatonana ireo boka ratsy.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia miresaka momba ireo top 10 tokony ho fantatrao.
Ny bot ity tranonkala mikaroka ao amin'ny Google ity ary matetika no raisina ho toy ny spider. Ny Googlebot dia mampiasa ny algorithmika ary mamaritra hoe iza ireo tranonkala sy bilaogy dia vonona ny hikorontana. Izy io dia maka ny tranonkala tsirairay mifototra amin'ny drafitra sy ny kalitaon'ny lahatsoratra. Ny kintan'ny fizotry ny fikirakirana ny Googlebot amin'ny lisitry ny adiresin'ny tranonkala web izay novokarin'ny fomba fitadiavana hafa ary dia nampitomboina tamin'ny tahiry sitemap izay nomen'ny webmasters. Mahatsikaiky ny rohy toy ny HREF sy ny SRC ao amin'ny tranonkala ary manampy azy ao amin'ny lisitr'ireo pejy hodiavina.
Baiduspider no robotan'ny milina fikarohana sinoa malaza, Baidu Chinese. Ity dia milina fikarohana mitady an'i Shina ho an'ireo rakitra audio, sary, ary bilaogy.
Ity orinasam-pifamoivoizana an-tserasera na bot ity dia ampiasain'i Microsoft ary manangona vaovao avy amin'ny tranonkala hanangana ny endriky ny fikarohana ho an'ny motera Bing.
Ny botan'I Yandex dia ny botan-tsarin'i Yandex..Yandex dia orinasa Rosiana malaza izay miasa iray amin'ireo fitaovam-pitadiavana sy tsara indrindra ao Rosia miaraka amin'ny ampaham-baraka maherin'ny 60% eto amin'ity firenena ity. Yandex no laharana faha-fikarohana karama farany indrindra eto amin'izao tontolo izao ary manana fikarohana mihoatra ny 130 tapitrisa isan'andro isan-kerinandro hatramin'ny septambra 2017 ary mpitsidika 23 tapitrisa.
Soso.com dia motera fikarohana hafa Shinoa. Ny fananan-tany Tencent Holdings Limited, orinasa fantatra amin'ny famoronana QQ. Hatramin'ny taona 2015, i Soso dia noheverina ho ny faha-35 tsara indrindra, ary ny tranokala be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao sy ny vohikala fahaefatra faha-12 ao Shina, ary ny laharana dia nampidirin'i Alexa. Soso dia mahita pejy 21.063.490 isaky ny pejy isan'andro.
Exabot dia mpikaroka tranonkala malaza any Frantsa, izay naorina tamin'ny taona 2000 avy amin'i Dassault Systèmes. Ity mpisava lalana mpikaroka ity dia ao ambadik'ireo tetikasa teknolojia mega-budget. ExaLead manome antsika fampahalalana marina sy mahasoa avy amin'ny aterineto.
Sogou.com dia motera fikarohana hafa, izay natsangana tamin'ny Aogositra 2010. Amin'izao fotoana izao, ny laharana dia 121 ao amin'ny tambajotran-tserasera Alexa. Sogou dia manome antsika ny endriky ny tranonkala maherin'ny folo arivo tapitrisa.
Google Plus dia mamela antsika hizara ireo tolo-kevitra amin'ny namantsika, ny fianakaviantsika ary ny olon-kafa eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fikarohana Google. Ny bokony dia manampy amin'ny fanombohana ny fahaiza-mitambatra an'i Google ary manome antsika fomba hanomezana zavatra ho an'ireo mpitsidika antsika.
9. Facebook Hitady Facebook
Ny Facebook dia mamela ny olona handefa rohy amin'ny votoaty mahasoa sy mampahafantatra ny namany amin'ny media sosialy. Ny rafitra dia miasa amin'ny alalan'ny fampisehoana sary maimaim-poana ary ny antsipiriany dia omena amin'ny votoatin'ny tranonkala, toy ny lohatenin'ny pejy, URL, horonan-tsary ary sary. Ny rafitra Facebook dia afaka mamerina mora foana ny fampahalalana rehefa manome ny rohy ny mpampiasa.
Mampiasa azy io i Google mba hahazoana ny Feo Atom sy RSS rehefa ampidirin'ny olona ao amin'ny Google Reader sy Google homepages. Ny Feedfetcher dia manangona sy mamelombelona ireo fepetra ampiasain'ny mpampiasa ary tsy mandady azy ireo amin'ny fikarohan'i Bing sy ny tolotrasa hafa an'ny Google Source .